२६ वर्ष कै उमेरमा श्रीमान बि’ते पछि जुत्ता चप्पल सिलाएरै छोराछोरी हुर्काएर बसिन् प्रतिमा(भिडियो हेर्नुस) – Butwal 24 News
२६ वर्ष कै उमेरमा श्रीमान बि’ते पछि जुत्ता चप्पल सिलाएरै छोराछोरी हुर्काएर बसिन् प्रतिमा(भिडियो हेर्नुस)
October 29, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on २६ वर्ष कै उमेरमा श्रीमान बि’ते पछि जुत्ता चप्पल सिलाएरै छोराछोरी हुर्काएर बसिन् प्रतिमा(भिडियो हेर्नुस)
रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा कि प्रतिमा पन्त एकल महिला हुन । दुई सन्तानकि आमा प्रतिमा अहिले थुप्रै महिलाहरुक प्रेरणाकि श्रोत बनेकी छिन । महिलाले पनि घर चलाएर खान सक्छन भन्ने उदाहरण बनेकी छिन अहिले प्रतिमा पन्त । बिबाह गरेर दुई सन्तान भए पछि उनका श्रीमानकि मृ’त्युु भयो । २६ वर्कै उमेरमा बि’धुवा बनेको प्रतिमाको जिन्दगीमा त्यो बेला सहनै नसक्ने अवस्था आएको थियो । श्रीमानको मृ’त्युको शो’क त छदै थियो, साथमा नाबालक छोराछोरी हुर्काउने जिम्मेवारी पनि
आफ्ना ती दुखका दिनहरुबाट अहिले यो अवस्था सम्म आइपुग्दा आफुले आफ्नो लक्ष पूरा गरेको जस्तो अनुभव हुने गरेको प्रतिमा बताउँछिन । २६ वर्ष कै उमेरमा बिधुवा बन्दा गाउँ समाजले पनि फरक दृस्ठिकोणले हेर्ने गरेको उनी सम्झिन्छिन । उमेर छदै बिधुवा बनेकी के बस्छे होला र ? छोराछोरीको पो बिजोक हुने भयो भन्ने जस्ता कुराहरु पनि त्यो बेलामा थुप्रैले गरेको उनी बताउँछिन । तर आफ्नो सोच भने आफू केही गरेर भए पनि छोराछोरी हुर्काएर बस्ने तर अरु बिहे नगर्ने भएकोले गर्दा नै अहिले यो अवस्थामा आएको उनी बताउँछिन ।
श्रीमानको मृ’त्यु पछि एकल महिला बनेकी उनलाई स्थानिय एक सहकारीले बुटिक तालिम दिए पछि आफुले त्यही एक महिनाको तालिमबाट सिकेको कुराले काम गर्दै जादाँ अहिले यहासम्म आईपुगेको बताईन । प्रतिमा अहिले हाते झोला, महिलाले लगाउने पोते माला, कुसन, जुत्ता चप्पल लगाएत सामाग्रीहरु बनाएर बेच्ने गर्दछिन । जसका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि आफुलाई सहयोग गरेको उनले बताउँछिन । एकल महिलाका लागि भन्दै नगरपालिकाले विभिन्न तालिमहरु संचालन गरि आफुहरुलाई तालिम दिएको उनले बताईन ।
सुरुवाती दिनमा आफुले बनाएका सामानहरु घरघरमा लगेर केही किनिदिनुस यहि पैसा लगेर आफुले छोराछोरीलाई पढाउने र खुवाउने भन्दै आग्रह गर्दै हिडेको उनी बताउँछिन । बिस्तारै आफुले अन्य समानहरु पनि बनाउन सिक्दै गए पछि ती सामानहरु सबैले मन पराईदिन थाले पछि आफुले बजार लगेर बेच्न थालेको उनले बताईन । सुरु सुरुमा घर घर गएर बेच्ने उनी पछि बजार गएर बेच्न थालिन । त्यहाँबाट राम्रै कमाउन थाले पछि उनले आफ्नो लगानी बढाउदै लगएको बताईन ।
अहिले उनी थुप्रै ठाउँमा बुट्क सम्बन्धि तालिम पनि दिन जाने गरेकी छिन । साथै घरै पनि सिक्न चाहानेहरुलाई उनले सिकाउने गरेको बताईन । त्यसबाट आफु जस्तै दुख पाएका थुप्रै महिला दिदिबहिनीहरुले अहिले आफै काम गरि कमाउन थालेको उनले बताईन । दुख परेर केही गर्छु भन्ने तर पैसा नभएर गर्न नसकेकाहरुलाई आफुले निशुल्क सिकाउने गरेको पनि बताईन । साथै त्यस्ता यदि कोहि भए आफुकहाँ पठाई दिन पनि आग्रह गरिन । अहिले विभिन्न स्थानमा तालीम दिन जादा पनि ६0/७0 हजार मासिक कमाउने गरेको उनि बताउछिन । आफैले बनाएको पनि बजार बेच्न लैजादा दैनिक ४/५ हजार हुने उनको भनाई छ । भिडियो हेर्न तल लास्ट मा जानुहोला
यो पनि पढ्नुहोस:तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गरे राज्यको सम्पत्ति जोगिने नेपालको जिकिर
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटकमा गर्दा राष्ट्रको सम्पति जोगिने बताएका छन्।
पार्टी कामको शिलशिलामा पोखरा पुगेका अध्यक्ष नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न सके खर्च कम हुने बताएका हुन्।उनले एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन गराउन सके राष्ट्रको सम्पति जोगिने बताए।
उनले भने – ‘मिल्छ कि मिल्दैन छलफल गर्नुपर्ला । यो सबै चुनाव एकैचोटी गरिदिनुपर्छ कि क्या हो लाग्छ । लोकल चुनाव, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि । खर्च पनि कम हुन्थ्यो । राष्ट्रको सम्पति पनि, निर्वाचनको खर्च पनि धेरै जोगिन्थ्यो होला । यसमा कुनै कानुनी अड्चन छ कि छैन थाहा छैन । तर मेरो दिमागमा के आइराछ भने एकचोटी एउटा चुनाव, अर्कोचोटी गर्दाखेरी धेरै खर्च हुँदोरहेछ । त्यसको कानुनी जटिलता केही छ कि, होइन भने त्यही बाटोमा किन नजाने भन्ने कुराहरु मलाइ लागेको छ ।’
अध्यक्ष नेपालले आफ्नो समूह छाडेर एमालेमा बस्ने नेताहरुको हरिबिजोग हुने बताए। एमालेमा कुनै नीति र विधि नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यहाँ रहनेहरु निजी कम्पनिको सदस्यका रुपमा रहने जिकिर गरे। केपी ओलीप्रति बफादार नहुनेहरुको हरिबिजोग हुने उनको तर्क छ। उनले भने– ‘मैले पटक पटक भनेको थिएँ, बालुवा पेलेर तेल निस्कनेवाला छैन। आज सुधारौँला भनेर गएका साथीहरुको हरिबिजोग भइरहेको छ। देखिरहनु भएको छ । उहाँको(ओली) आफ्नै नीति र विधि छ। त्यसमा बसेका मान्छे उहाँको निजी कम्पनीका सदस्यका रुपमा रहन बाध्य हुनेछन् । त्यो कुनै सामूहिकताको सिद्धान्तबाट चल्दैन । त्यसले कमिटी प्रणालीलाई पालना गर्ने छैन । त्यहाँ केपी ओलीप्रति बफादार हुनेसँग बस्न पाइन्छ । बफादार भएन भने उसको हरिबिजोग हुनेछ ।’
उनले एमाले छाड्नेहरुको भविष्य सुरक्षित रहने पनि बताए। एमालेमा बस्नेहरुको भविष्य नभएको भन्दै उनले अब एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति आउने बताए। ओलीसँगै एमाले पनि सकिने उनको भनाइ छ।(भिडियो हेर्नुस)
बुटवलमा ओभरसियर पढेकी मृ’त्यु हुनुभन्दा २ दिन अघि मञ्जुले बनाएकी थिइन् यस्तो टिकटक, फोनमा आमासंग कुरा गर्दा गर्दै…. आमाको एस्तो हालत कठै(भिडियो हेर्नुस्)